May volon-tratra… : nanome baiko ny hanomezana vola ny mpitatitra ny fanjakana | NewsMada
May volon-tratra… : nanome baiko ny hanomezana vola ny mpitatitra ny fanjakana
Nikoropaka ka nivory haingana fa efa ho may Ambondrona ? Nanaovana filankevitry ny governemanta manokana teny Mahazoarivo mihitsy, omaly, ny tranga miseho amin’izao fotoana izao, indrindra ny fiakaran’ny saran-dalana ho 500 Ar. Nivoitra tamin’izany ny nanomezana baiko ny tompon’andraikitra mba hamoaka ny vola fanampiana ireo mpitatitra, mba hisakanana ny fiakaran’ny saran-dalana. Anisan’ny antony nampiakaran’ny Vondron’ny mpitatitra an-dRenivohitra (UCTU) ho 500 Ar ny saran-dalana ny tsy nahazoan’izy ireo vola fanampiana. Na nahazo ihany saingy, tsy ara-potoana satria efa tamin’ny taona 2015 ny nahazoan’ny sasany amin’izy ireo izany. Mbola ananan’izy ireo trosa ny masoivohon’ny fitaterana an-tanety (ATT), tokony handoa izany vola izany. Nahatonga ny amboletran’ny mpitatitra naka fanapahan-kevitra hampiakatra ny saran-dalana izany. Nikaroham-bahaolana maika tahaka izany koa ny vidin-tsolika sy ny fiakaran’ny vidim-bary tamin’ity filankevitra manokana ity.
Manoloana ireo, mahita vahaolana ihany izany ny fanjakana rehefa halohalika tahaka izao ny ranom-bary. Niandrasana nifandona sy nifandratra ny mpanjifa sy ny mpitatitra. Efa nitabataba any anaty haino aman-jery sy eny amin’ny tranonkalam-pifandraisana ny olona vao taitra. Tsy mba manana vina sy vahaolana mialoha fa miandry ny tabataba sy savorovoro tahaka izao hatrany vao maka fanapahan-kevitra.
Vahaolana petatoko na famonoana afo…
Tsy vitan’ny ambanambana sy ny fitanisana lava fa haka ny fepetra tahaka izao sy izao intsony ny raharaha fa mitaky asa, vavany avy hatrany satria efa mandalo fotoam-pahamehana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy vitan’ny vahaolana petatoko na vonjitavanandro mahazatra na famonoana afo intsony izao.
Tokony hanaovana filankevitra manokana tahaka izany avokoa ireo olana lehibe eto amin’ny firenena. Anisan’izany ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana, ny olan’ny delestazy sy ny rano. Ny fitsaram-bahoaka mahazo laka, miteraka ra mandriaka sy faty olona. Ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanodinkodinam-bolam-panjakana…
Mba tsy ho afo mololo sy ho am-boalohany ihany koa anefa ny fanapahan-kevitra raisina ka hiverina amin’ny lalan-dririnina miandry amin’ny fotoana farany hatrany…